WordPress Plugin: Sida loo sameeyo Suaalaha iyo jawaabaha QUIZ - AqoonKaal.com
Friday, February 28, 2020 10:39 pm
Casharkan waxa uu ku saabsan yahay sida loo sameeyo su’aalo iyo jawaabo u qoran qaabka imtixaanka (QUIZ) ayadoo la adeegsanayo barnaamijka WordPress, gaar ahaan waxaan adeegsan doonaa barnaamijyo lagu siyaadiyo WordPress (Plugin) kuwaas oo sahlaya sida loo sameeyo suaalaha oo akhristayaashu ka jawaabayaan..
Qaabkaas su’aalaha iyo jawaabahooda sida loo sameeyo ka daawo Video Halkan (plibTV) ama Halkan (mp4) ama Halkan (m4v) ama hoos ka daawo:
WordPress waa barnaamij loo adeegsado dhismaha Website. Waxaana barnaamijkaasi leeyahay kabayaal ama PLUGINS ka qayb qaata farsamada iyo adeegsiga WordPress, isla markaasna hawl fududeeya adeegyada uu qabto WordPress.
aad ayaad ugu mahadsantahay sida aad waqtigaaga qaaliga nooga faaiidaysay
walaal sharaxaad balaaran managasiinkartaa sida aan u isticmaali karno ( wordpress ) adigoo mahadsan.
mahadsanid walaal, barnamijka WordPress waxa uu ka mid yahay barnaamijyada lagu dhiso website-ka, waxaa asaas u ah HTML, waxaana ka shaqaysiiyo barnaamijka loo yaqaan PHP.
Adeegsiga WordPress aad ayey u sahlan tahay, marka aan casharrada HTML ee dhowaanta bilaabay meel rasmi ah ku ogaado, yacni meel fiican laga gaaro, markaas waan bilaabi karaa casharro ku saabsan adeegsiga WordPress insha Allah.
asc Walalaha aqoonkaal aad baan idiku mahad celinaynaa .
casharada wordprocessing runtii aad buu mihiim nooguyhay.
waxbadana waan ka faaldnay waadna ku mayadsantlhiin dib uhabaynta casriga ah ee aad website ka aad ku samayseen
xaaji ahmad says:
adsan tihin dhamaan aaad baan oga faaidnay barnaajimka wordpress waa mahadsan tihiin mar 2 aaad
Macalin Maxamed Ali
ilaahay hakaa abaal mariyo ajerkeedana haku siiyo si aad cilmiga noo soo gaarsiisay
waana ka faa iidaysan
macallin waxaa iifurmi wayay casharka su aalaha iyo jwb sida loo sameeyo marka side loo faran karaaa waa uu iga diiday macalin
Asc walaal Video-ga waxa uu ku jirey Blip tv, waxaanse hubinayaa in aan video computerka ku xafiday si markaas aan ugu daabaco Youtube.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay MACALIN MAXAMED CALI iyo dhamaanba hawl wadeenadesa ilaahay ajar keeda haydin siiyo
kulay anigu waxaan dhigta machad computerka loo yaqaano ORBIT INTERNATIONAL BURAO kolay barnaamijkasi aad ayuu faa iido iigu leeyahay maalintiina laba jeer ayaan soo gala waad salaamantihiin
abdirashid ali eid says:
asc ustaad. waxaan rabaa haddii shirkadu ee shaqeeyso sanado baddan . xisaab xirka shircadda wax miyaa iska badalayo capitalkii ama rasulmakii lagubilabay sandii koobaad. tasaale hadii shirkad lagu bilbay 50000$ sanadka sadaxaan ma 5okun kii ayaa loo qabinaa faaidda
su’aashu casharkee la socotaa walaal, waayo si wacan uma fahmin